दक्षिणकालीले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् साऊन ७ गते बुधबारको राशिफल
Homeबिबिधदक्षिणकालीले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् साऊन ७ गते बुधबारको राशिफल
July 22, 2020 kandai kanda 1 बिबिध
रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तयार पार्‍यो यस्ता चार विकल्प
कछाड बाँधेर संसद जाने पूर्वसांसद बर्मन बुढाको निधन
देउवालाई पत्र;अमरेशकुमार सिंहलाई कारबाही गर्न माग
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई कारबाहीको माग गर्दै सिंहको गृह जिल्ला सर्लाहीका १२ जना नेताले प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएका छन्। सर्लाहीमा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको र ईमान्दार कार्यकर्ताले सदस्यता नपाएको भन्दै बुधबार साँझ बालुवाटार पुगेर देउवालाई सांसद पदबाट […]
राजीनामा फिर्ता लिन गरेको आग्रहमा भीम रावलले भने-
प्रदेशका मन्त्री तथा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले नेता भीम रावललाई सांसद पदबाट राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनको निवासमै पुगेर राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए । ‘सुदूरपश्चिमको अभिभावक, सक्रिय राजनीतिमा लागेको व्यक्ति संघीय संसदमा रहिरहन पर्छ । […]
किन लम्बियो रेल सञ्चालनको प्रक्रिया ?
काठमाडौं । जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै किसिमका तयारी पूरा भएको छ । पूर्वाधार, जनशक्ति लगायतका सबै तयारी भइसकेकाले अब नेपाल र भारतका सरकारबीच समझदारी गरेर रेल सञ्चालन गर्न सकिने नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। हिजोआज नै रेल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएकामा सरकार परिवर्तन भएकाले […]
नागरिकको जीवन रक्षा राष्ट्रको पहिलो दायित्व : गृहमन्त्री
काठमाडौं । बाल अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मीले समाजमा बढेको हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधबाट देशलाई जोगाउनु पर्ने बताएकी छन् । आज गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर उनले जघन्य अपराधबाट मुक्ति दिँदै महिला र बालबालिकालाई सुरक्षा दिन कडा कानून बनाउन आग्रह गरेकी थिइन्। समाजमा नकारात्मक प्रभाव धेरै परिरहेकोे […]
माधव कुमार नेपाललाई भेट्न प्रचण्ड पुगे कोटेश्वर
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कोटेश्वर पुगेका छन् । केहीबेर अघि प्रचण्ड नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका हुन् । पछिल्लो विकशित राजनीतिक घटनाक्रम बारे छलफल गर्न प्रचण्ड कोटेश्वर पुगेका स्रोतले बताएको छ ।
काठमाडौँ । आजभोली मोटो मानिसको संख्या तेज गतिले बढि रहेको छ । धेरै मानिसहरुले शुरुवातमा मोटोपनमा त्यति ध्यान दिदैंनन् । तर जब मोटोपन धेरै बढेपछि त्यसलाई घटाउन घण्टौं पसिना बगाउँछन् ।मोटोपन घटाउनको लागि खानपीनमा सुधार [...]
थाइराइड बाट बच्न यी ५ चीजबाट जोगिनुस्
यसरी घटाउनुहोस् तौल